Golaha Kaabineega DDSI Oo Kulan Yeeshay. - Cakaara News
Golaha Kaabineega DDSI Oo Kulan Yeeshay.
Jigjiga(cakaaranews),Isniin, 9ka January, 2017. Kulan ay yesheen Golaha Kabineega DDSI oo uu hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtooyada DDSI.
Haddaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa golaha kaabineega DDSI soo hordhigay ajendayaasha kulanka oo ahaa qiimaynta warbixinada waxqabadka 6 bilood ee sanad miisaaniyeedka 2009TI ee xafiisyada heer deegaan, sidii loo xoojin lahaa hawlaha horumarka, nabadgalayda iyo maamulka suuban, dar-dargalinta mashaariicaha horumarineed ee waawayn gaar ahaan dhinaca mashaariicaha biyaha deegaanka iyo in ay si toos ah u soo iibiso xukuumada DDSI 200 oo booyadaha biyaha ah oo lagaga jawaabayo baahida bulshada ee dhanka biyo la aanta ee ay keenta abaarta ka dhalatay isbadalka cimilada ee afka qalaad loo yaqaano (EL Nino effect).
Masuuliyiinta xafiisyada heer deegaan ayaa soo bandhigay warbixinta waxqabadka 6 bilood ee sanad miisaaniyeedka 2009TI warbixinadaasi oo ku sar-gonayd fulinta qorshayaashii u dajisnaa xukuumada DDSI gaar ahaan dhinacyada biyaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha, jidadka iyo guud ahaan waxka qabadka adeegyada horumarka
Golaha kaabineega ayaa si qoto-dheer u falanqeeyay qodobada kulankan ee kor kuxusan. Wuxuuna goluhu codbuuxa ku ansixiyay hirgalinta iyo meel-marinta dhamaan ajandayaasha kulankan